मेटमणीले पैसा नबुझाएकै कारण मन्त्री नबनेको भयो पुष्टि, प्रमाण नै बाहिरिएपछि कोटेश्वरमा तनाव ! – GALAXY
मेटमणीले पैसा नबुझाएकै कारण मन्त्री नबनेको भयो पुष्टि, प्रमाण नै बाहिरिएपछि कोटेश्वरमा तनाव !
काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नेता मेटमणी चौधरीले पैसा नबुझाएकै कारण मन्त्री नबनेको पुष्टि भएको छ । मेटमणिको नाम मन्त्रीको लिष्टबाट अन्तिममा आएर काटियो । यसको मुख्य कारण थियौ चौधरी एस पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पैसा बुझाउन नसक्नु ।